Daawo:- Puntland oo shaqo ubalanqaaday shaqaalihii laga soo eryay deegaanada Somaliland + Hubkii qardho la keenay… – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Puntland oo shaqo ubalanqaaday shaqaalihii laga soo eryay deegaanada Somaliland + Hubkii qardho la keenay…
September 3, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 1
Wasiirka Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland Xuseen Cismaan Lugatuur oo maanta shir jaraa’id ku qabtay maalada Badhan ayaa ka hadlay warar qaar kamid ah warbaahinta Soomaalida ka qortay garoonka diyaaradaha Qardho iyo sidoo kale shaqaale dhawaan Somaliland shaqo joojin ku sameysay.
Wasiir Lugatuur ayaa beeniyay in garoonka diyaaradaha Qardho laga dajiyay hub, wuxuuna tilmaamay in garoomada diyaaradaha Puntland yihiin kuwo laysku halayn karo oo maamul wanaagsan leh.
Sidoo kale wasiirka ayaa xusay in intii ay diyaarada Ethiopian Airlines duulimaadka ka bilowday Puntland ay cadow yeesheen garoomada diyaaradaha Puntland.
Dhanka kale Wasiirka Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland ayaa sheegay in ay shaqo siinayaan 42 shaqaale ah oo ka shaqaynayay garoonka diyaaradaha Hargeysa, kuwaas oo dhawaan Somaliland ku sameysay shoqo joojin, markii hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan duulumaadka hawada ee ICAO ku wareejisay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wasiir Lugatuur ayaa dowladda Federaalka iyo ICAO ka codsaday in shaqaalahaas ay u soo wareejiyaan Puntland oo sheegay in ay u heyso mid ka wanaagsan shaqadoodii hore.
Somaliland diyaar ayay utahay inay lahadasho DFS laakin shan shardi ayay wadataa “Akhriso”.
Puntlaan haddaan hantideeda la gacan bidixeynin waa awooddaa inay raggan iyo dhaliinteeda shaqaaleyso oo ku deeqdo lacag ay ganacsiyo ku furtaan. Fursado qaali ah waa leedahay waxaase curyaamiyay musuqa iyo maasuqa kuwa xilalka lagu aaminay. Welina ma lahan qorshe heer dawladeed ah oo arimahan toos u taba galiya.